“TARATASY FANAIRANA HO AN’NY VAHOAKA AMIN’IZAO FAHA 60 TAONAN’NY FAHALEOVANTENAN’I MADAGASIKARA SY FAHA 31 TAONAN’NY AKAMASOA IZAO” | Akamasoa
“TARATASY FANAIRANA HO AN’NY VAHOAKA AMIN’IZAO FAHA 60 TAONAN’NY FAHALEOVANTENAN’I MADAGASIKARA SY FAHA 31 TAONAN’NY AKAMASOA IZAO”
Andralanitra, faha 08 JIONA 2020
Nivory ny Komity iombonana, miaraka ny Birao Akamasoa sy Mompera, mba handinika momba ny zava-misy ao an-tanàna tsirairay avy. Nojerena ny lafiny tokony amboarina amin’ny izao 31 taona Akamasoa izao ary ny fankalazana ny 60 taona Fahaleovantenan’i Madagasikara.
Tsapan’ ny mpivory fa mila ezaka lehibe isika mianakavy eo amin’ny lafin’ ny fiainantsika manontolo. Manomboka amin’ny fiovana ny Toetsaina. Mila toe- tsaina vaovao ary miala ny toe-tsaina lomorina teo aloha izay nampahantra antsika. Miezaka manabe ny zanaka mba ho olombanona satria ny fianarana no” lova tsara indrindra”!
Tsy maintsy mandray andraikitra amin’ny fianakaviana sy manamboatra ny simba rehetra. Betsaka ny trano simba nefa jerena fotsiny , miandry olona hanao azy nefa ianao ihany no mipetraka ao. Misy vidiny io trano io.
Ny simba manambara fa ny fianakaviana mipetraka ao tsy nandray andraikitra ary tsy mazoto miasa.Torak’ izany ny fahadiovana, maloto ny Tanàna ary ny trano sy ny tokotany.
Soa ihany fa misy ny mahalala madio. Tsy manadino ny fikarakarana ny zavaboary sy tontolo iainana.
Mampalahelo fa misy olona manao fitakiana. Fantaro fa tsy misy manana zo mitaky na inona na inona ato, satria samy miasa amin’ny fitiavana. Tsy misy amintsika ny “atero ka alao”.
Aoka tsy ho adino fa mandoa hofatrano sy ny Tsena isam-bolana ny fianakaviana mipetraka amin’ny trano Akamasoa ka manaitra anao hanatanteraka izany fandraisana anjara kely izany.
Ankoatra izany, mila fiovana lalina amin’ny zava-mahadomelina toaka sy rongony, izay mamono “ny fanahy maha olona” ary mampiala antsika amin’ny fiarahamonina.
Ny tsy miraharaha sy fakamoana mahatonga ny sasany mangalatra, ka misy Tanàna sasany manjaka ny halabotry.
Ao koa ny tanora vavy na lahy milalao rendrarendra, ny ray amandreny mangina ary miafara amin’ny fanambadiana alohan’ny fotoana, ka matetika tsy maharitra, misaraka eo no ho eo.
Efa ela isika ato Akamasoa nikasa momba ny fahaleovantena mba samy tompon’ny fivelomana, fianarana sy fitsaboana. Nefa isika mbola miankina lava amin’ny fanampiana avy amin’ny Akamasoa sy avy any Ivelany. Ny Akamasoa tsy afaka misolo ny Fanjakana Malagasy.
Ny ray amandreny izay tia ny zanany dia tsy maintsy manabe azy mba hianatra aloha, manomana ny ho avy.
Ary izay manana trano sy asa no afaka mamorina tokantrano vaovao sady ampy taona no matotra.
Angatahina ny mponina Akamasoa rehetra mba manao ny “caisse maladie” raha tiany hanampy azy ny Akamasoa amin’ny fitsaboana.
Izay rehetra tsy miezaka ary sanatria manao tsinontsinona ireto fepetra ireto dia voatery miala amin’ny tranony izany olona izany. Azo lazaina, izy ihany no mampiala ny tenany noho izy tsy nitandrina ny Dina.
Tato ho ato efa nisy olona roa niala ny tranony, ny iray nivarotra rongony, ny iray nanolanana zazavavy. Ny olona manao ratsy tsy miantsy miala, dia mandeha monina any ivelan’ny Akamasoa.
Akamasoa Tsy manaiky ireo olona manao “mpitaribato vilam-bava”. Milaza miova nefa tsy miova.
Raha miasa sy manaja ny DINA Akamasoa ianao sy ny fianakavianao dia arahaba soa arahaba tsara . Ianao sy ny zanakao no tompon’ny Akamasoa. Fa raha ianao manao tsinontsinona ny asa Akamasoa sy ny tarigetrany dia ianao no mampiala ny tenanao ato amin’ny trano nidiranao tamin’ny fomba madio, nefa avy eo ianao mivadika ka manohitra ny toe-tsaina sy ny soa iombonana.
Raisina ankafaliana izay manaja sy tia ny Akamasoa, ary te hiara-monina amintsika hanatsara ny faripiainana hahasoa ny ankohonana sy ny taranaka.
Angatahina fa alohan’ny fankalazana ny Fahaleovantenan’i Madagasikara amin’ny 26 Jiona dia samy miezaka manatsara sy manadio ny tranony sy ny manodidina azy mandritra ny taona .
Raha tsy misy fiovana dia mandray andraikitra ny Komity, ny Securité ary ny Birao Akamasoa miaraka amin’ ny Mompera mba hanasazy izany fianakaviana tsy manaraka ny fepetra sy ny Dina Akamasoa ary ny Lalàna velona mifehy ny olom-pirenena rehetra eto amin’ny Firenena.
Marary izao tontolo izao ary marary koa ny fanahintsika. Ka tsy maintsy mianatra miara monina isika ary miverina amin’ Andriamanitra. Mila fibebahana maharitra sy fivavahana marina isika . Aza mamita-tena fa Andriamanitra mahita ny ataonao .
Hankalaza amin’ny fo, fanahy sy saina madio ary mendrika izao fety ny 60 taona ny Fahaleovatena ny Tanindrazantsika sy ny 31 toanan’ny Akamasoa.
Adidy masina ho an’izay manana saina sy fanahy izao antso fanairana izao. Raiso ho fankaherezana izao taratasy nataonay izao ho anao ary ho antsika rehetra izay Tia an’Andriamanitra, Tia Fiangonana, Tia Tanindrazana ary Tia ny fianakaviana.
“Asa fa tsy kabary“ ary aza adino: ”Toky fitaka fa ny atao no hita”.
Miezaha manomboka izao dia izao. Ho ela velona ianao sy ny ankohonanao. Ho ela velona ny Firaisankina sy ny tolona Masina ato amin’ny Akamasoa . Samia Ho Tahin’Andriamanitra.
Hoy ny Komity Iombonana,